पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने तिनाउ पुल जोखिममा, जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने खतरा !
बुटवल, २८ जेठ –पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने बुटवलस्थित तिनाउ नदीको पुल कमजोर बन्दै गएको छ । पुलमुनिबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा र मिस्कट) निकाल्दा पुल कमजोर बनेको हो । तिनाउ नदीको बढ्दो दोहनको असर पुलमा परेको छ ।
बढ्दो दोहन र वर्षायामको बाढीले नदी गहिरिँदै जाँदा पुलका पिल्लर (खम्बा)हरूको फाउण्डेसन करीब साढे चार मिटरसम्म देखिन थालेका छन् । चुरे क्षेत्रबाट भेल बनेर आउने पानीका लागि सहज निकास नपाउँदा तिनाउ नदी प्रत्येक वर्ष गहिरिँदै गएको छ ।
तिनाउको बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरेका इञ्जिनियर खेटराज दाहाल तिनाउ पुल जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने बताउँछन् । ‘नदीको गहिराई बढ्दै जाँदा पुललाई अड्याउने फाउन्डेसन साढे चार मिटर देखिएको छ,’ दाहालले भने, ‘पुल धेरै कमजोर भएको छ । जतिसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ ।’
वि.सं. २०३८ सालमा बनेको पुल २२६ मिटर लामो छ । दैनिक हजारौँ सवारी साधन आवत/जावत गर्ने पुल गत वर्ष ठूला–ठूला खाल्डा परेर जिर्ण बनेपछि सामान्य टालटुल गरिएको थियो । अहिले फेरि पुलमा सामान्य खाल्डाखुल्डी देखिन थालेका छन् । जसले गर्दा पुलमा एकसाथ धेरै सवारीसाधान चल्दा पुल हल्लिने गर्छ ।
वातावरण क्षेत्रमा विज्ञ युवराज कंडेलले तिनाउको अवैध दोहनले पुल कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘नदी आसपासमा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले नदीको धार परिवर्तन गराइदिँदा नदी गहिरिँदै गएको छ,’ कंडेलले भने, ‘नदीको अवैधरूपमा हुने दोहन रोक्नुपर्छ ।’ पुलभन्दा तल्लो र माथिल्लो भागमा जथाभावी भइरहेको नदीजन्य पदार्थ (गिट्टीढुङ्गा) उत्खनन हो ।’
उनले थपे, ‘ नदीको निश्चित गहिराइमा पुलको बेस राखिएको हुन्छ । त्यो बेसको सपोर्ट छेउछाउको भू–भाग नहुँदा बेस थर्किन्छ र चर्किन्छ । पुल हल्लिएर ढल्ने सम्भवना धेरै हुन्छ ।’
पुल कमजोर भएपछि नदीको दक्षिणतर्फ गत वर्ष बेड बाँधिएको छ । सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्येको नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
पुलको तल/माथि पाँच सय मिटरसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर यहाँ त्यो मापदण्ड लागू नहुँदा जिल्लामा मुख्य राजमार्गमा पर्ने धेरैजसो पुल कमजोर भएको डिभिजन सडक कार्यालयका इञ्जिनियर रमेश जैसवाल बताउँछन ।
उनले भने, ‘नदी दोहनको असर पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने रूपन्देहीका साना/ठूला सबै पुलमा परेको छ । जसले गर्दा पुलहरू कमजोर बन्दै गएका छन् ।’
पछिल्लो समय यो पुल साँघुरो समेत हुँदा दैनिकजसो पुलमा जाम हुन थालेको छ । कमजोर पुलले धेरै भार थेग्न सक्दैन । तिनाउ पुलको विकल्पका रूपमा बन्न लागेका देवीनगरको पुल र पुरानो बटौली जोड्ने पुल अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँदको समयमा तिनाउमा पानी कम हुँदै गएको छ । यही अवस्था रहने हो भने अबको १०/१५ वर्षपछि बुटवलमा खानेपानीको ठूलो हाकाहार हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
२०३७ सालको बाढीले अहिले रहेको राधाकृष्ण मन्दिर नजिकैको पुल बगाएपछि अहिले सञ्चालित पुल बनेको हो । रूपन्देहीका लागि तिनाउ नदी ठूलो सम्पत्ति हो । नदीजन्य पदार्थको प्रयोग नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । प्रत्येक वर्ष वर्षायामको भेलबाट जम्मा भएका पदार्थहरू मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ ।
नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर धमाधम बस्ती बसेका छन् । जसले गर्दा नदीको बहाव क्षेत्र साघुरिँदै गएको छ । ५ सयदेखि ७ सय मिटर क्षेत्रमा बग्दै आएको तिनाउमा ३ सय मिटर क्षेत्रमा साँघुरो हुँदै गएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने, पुल आफूहरूको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै त्यसप्रति चासो दिएको छैन ।
तिनाउको उपल्लो तटीय क्षेत्र सिद्धबाबामा खस्ने पहिरो केही मिनेट थुनिए त्यसले बुटवल तथा आसपासको क्षेत्रको पुर्‍याउने असर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।